Estrogens: Ukusetyenziswa, iimveliso eziqhelekileyo kunye nolwazi lokhuseleko - Ulwazi Lweziyobisi | Eyenkanga 2021
Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Inkampani Uluntu, Inkampani Imfundo Yezempilo, Impilo Inkampani, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Iindaba Iziyobisi Vs. Umhlobo Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Imfundo Yezempilo Iindaba Ulwazi Lweziyobisi Ukuzonwabisa Uluntu, Impilo Impilo
Eyona >> Ulwazi Lweziyobisi >> Estrogens: Ukusetyenziswa, iimveliso eziqhelekileyo kunye nolwazi lokhuseleko
Estrogens: Ukusetyenziswa, iimveliso eziqhelekileyo kunye nolwazi lokhuseleko
Uluhlu lweeestrogens | Yintoni ii-estrogens? | Indlela abasebenza ngayo | Sebenzisa | Ngubani onokuthatha ii-estrogens? | Ukhuseleko | Imiphumela | Iindleko
Ukuba ufumana iimpawu ze-menopausal njengokutshisa okushushu, ukuphazamiseka kokulala, ukubila ebusuku , kunye nokoma kwilungu lobufazi, umboneleli wakho wezempilo usenokuba ukhankanye ukutshintshwa kwe-estrogen, okanye unyango lwehomoni (HRT). Ezi mpawu zingonwabisiyo zenzeka xa ama-ovari kunye ne-adrenal gland (eyinxalenye yenkqubo ye-endocrine) emzimbeni yenza i-estrogen encinci. Ke, amayeza athatha indawo ye-estrogen anokunceda ukuphucula iimpawu zokuyeka ukuya exesheni, kunye nokuthintela i-osteoporosis.
Unyango olubuyisela iHormone lunokubandakanya i-estrogen yodwa, okanye i-estrogen kunye neprogesterone.
Kwabafazi abane isibeleko , Unyango lwehomoni lubandakanya zombini i-estrogen kunye neprogesterone. Kungenxa yokuba i-estrogen yodwa inyusa umngcipheko womhlaza we-endometrium kwabasetyhini abanesibeleko.
Abasetyhini abanesibeleko kwaye abanaso isibeleko akufuneki bathathe iprogesterone nge-estrogen. Aba bafazi banokusebenzisa iimveliso ze-estrogen kuphela. Eli nqaku ligxile kwiimveliso ze-estrogen kuphela.
Kule nqaku, siza kuthetha ngee-estrogens ezahlukeneyo, kubandakanya amagama abo kunye neefomula zabo, iziphumo ebezingalindelekanga, ulwazi ngokhuseleko, kunye nokunye. Qhubeka nokufunda apha ngezantsi ukuze ufunde ngakumbi ngee-estrogens.
Igama lebrand (igama eliqhelekileyo) Iyafumaneka njenge Ixabiso eliphakathi lemali Ixabiso elilodwa Funda nzulu
UAlora (estradiol) Isiqwenga $ 157 kwibhokisi enye yeepatches ezi-8 Fumana i-Alora coupons Iinkcukacha zika-Alora
Climara, Climara Pro (estradiol) Isiqwenga $ 121 kwibhokisi enye eneempepha ezi-4 Fumana amakhuphoni eClimara Iinkcukacha zikaClimara
I-Delestrogen (i-estradiol valerate) Inaliti $ 218 ngesitya esinye Fumana amatikiti e-Delestrogen Iinkcukacha ze-Delestrogen
Idivigel (estradiol) Abantu $ 181 kwibhokisi enye yeepakethi zejeli ezingama-30 Fumana amatikiti eDivigel Iinkcukacha zeDigelgel
I-Elestrin (estradiol) Abantu $ 303 ngebhotile enye Fumana amatikiti e-Elestrin Iinkcukacha zikaElestrin
Umtya (estradiol) Ipilisi, cream lobufazi $ 262 ityhubhu enye Fumana i-Estrace coupons Iinkcukacha zomgca
Umtya (estradiol) Ukufaka kwilungu lobufazi I $ 764 yeringi enye Fumana i-Estring coupons Iinkcukacha zomjelo
Imvexxy (estradiol) Ukufaka kwilungu lobufazi $ 229 yokupakisha Fumana amatikiti e-Imvexxy Iinkcukacha ze-Imvexxy
I-premarin (i-estrogens edibeneyo) Ipilisi, ukhilimu, inaliti $ 485 ityhubhu enye Fumana amatikiti ePremmar Iinkcukacha zangaphambi komtshato
IVagifem (estradiol) Amacwecwe obufazi $ 243 kwibhokisi enye yeepilisi ze-8 zangasese Fumana amatikiti eVagifem Iinkcukacha zeVagifem
IVivelle-Dot (estradiol) Isiqwenga $ 157 kwibhokisi enye yeepatches ezi-8 Fumana iVivelle-Dot coupons Iinkcukacha zeVivelle-Dot
Yuvafem (estradiol) Amacwecwe obufazi $ 243 kwibhokisi enye yeepilisi ze-8 zangasese Fumana iYuvafem coupons Iinkcukacha zeYuvafem
I-gel ye-EstroGel (estradiol)
I-Evamist (estradiol) yokutshiza ulusu
Abasetyhini (i-estradiol acetate) iringi yelungu lobufazi
Ithebhulethi yamadoda (esterified estergen)
I-Menostar (estradiol) patch (isetyenziselwa ukuthintela i-osteoporosis)
IMinivelle (estradiol) iqhosha
Iipilisi (i-estropipate) ipilisi okanye ukhilimu wesini
I-Osphena (ospemifene) ipilisi (i-estrogen agonist / antagonist)
Abasetyhini baneehormone ezimbini zesini eziphambili: i-estrogen kunye neprogesterone. (Amadoda nawo anexabiso elincinci le-estrogen.) I-Estrogen inendima ebalulekileyo. Izisa ukufikisa kwaye inoxanduva lokuya exesheni. I-Estrogen ikwakhusela amathambo kwaye ineziphumo kwezinye iindawo zomzimba. I-Estrogen yenziwa ikakhulu kwii-ovari, kwaye iincindi zamadlala zivelisa inani elincinci le-estrogen, nazo. Umzimba wenza iintlobo ezintathu ze-estrogen: estradiol, estriol, kunye ne-estrone. I-Estrone kuphela kwe-estrogen eveliswa ngumzimba emva kokuyeka ukuya exesheni.
Ngamanye amaxesha, amanqanaba e-estrogen anokuphakama kakhulu. Umzekelo, umzimba wakho unokwenza kakhulu okanye ungathatha i-estrogen eninzi, umzekelo, ngokusebenzisa iipilisi zolawulo lokuzalwa (izinto zokucwangcisa ngomlomo).
Amanqanaba e-estrogen ayatshintsha kumjikelo wenyanga. Kwifollicle, okanye inqanaba lesilumko (phakathi kwexesha lakho kunye ne-ovulation), amanqanaba e-estrogen ayonyuka. Amanqanaba aphakamileyo phakathi komjikelezo wakho wokuya esikhathini (i-ovulation) kwaye asezantsi ngexesha lokuya esikhathini. Amanqanaba e-Estrogen ancipha ngexesha lokuyeka ukuya exesheni.
Xa abantu basetyhini beyeka ukuya exesheni, umzimba wenza i-estrogen encinci, ukudala ukusilela kwe-estrogen. La manqanaba asezantsi anokubangela iimpawu zokuyeka ukuya exesheni, ezinje:
Amaxesha angaqhelekanga / amaxesha ayeke
Ukoma kwesini kunye nokubhitya
Ukunyuka kwexesha lokuya esikhathini
Unyango lwe-Estrogen, okanye unyango lwehomoni, luyanceda ukubuyisela i-estrogen. Ukutshintsha i-estrogen kunceda iimpawu ezidweliswe apha ngasentla.
Zisebenza njani ii-estrogens?
Xa ukuyeka ukuya exesheni kwenzeka, umzimba wenza iihomoni ze-estrogen ezimbalwa. La manqanaba asezantsi ehomoni abangela iimpawu ezinjengokubengezela okushushu, ukubila ebusuku, ukungonwabi kwilungu lobufazi, kunye neengxaki zokulala. Amayeza e-Estrogen athatha indawo ye-estrogen umzimba wakho uyeke ukwenza. Ngokwandisa amanqanaba e-estrogen, iimpawu zokuyeka ukuya exesheni ziyaphucuka.
Zisetyenziselwa ntoni ii-estrogens?
Owona mqondiso uqhelekileyo we-estrogens kukunciphisa iimpawu zokuyeka ukuya exesheni, njengokuma kwelungu lobufazi kunye nokukhanya okutshisayo. Iimpawu ezithile zokuyeka ukuya exesheni zibandakanya:
Unyango lweempawu eziphakathi / ezinzima ze-vasomotor (ezinje ngokutshisa okutshisayo) ngenxa yokuyeka ukuya exesheni.
Unyango lweempawu ezimodareyithayo / ezinzima ze-vulvar kunye ne-atrophy yelungu lobufazi ngenxa yokuyeka ukuya exesheni.Kuyacetyiswa ukuba iimveliso zelungu lobufazi zisetyenziswe xa isalathiso sinyanga kuphela i-vulvar kunye / okanye iimpawu zangasese ngenxa yokuyeka ukuya exesheni.
I-Estrogens inezinye izikhombisi ngokunjalo. Iimpawu ezithile ziyahluka ngokwamayeza athile kunye nokwenziwa. Ezinye izinto ezibonisa ii-estrogens zibandakanya:
Unyango lokwabelana ngesondo okubuhlungu ngenxa ye-vulvar kunye ne-atrophy yelungu lobufazi
Unyango lwe-estrogen esezantsi ngenxa yehypogonadism, castration, okanye ukusilela kwe-ovari ephambili
Unyango lomhlaza webele (ukuphucula umgangatho wobomi) kubafazi abathile nakumadoda anesifo se-metastatic
Unyango lomhlaza weprostate oxhomekeke kwi-androgen (ukuphucula umgangatho wobomi)
Uthintelo lwe-postmenopausal osteoporosis (kuphela ukuba usemngciphekweni omkhulu kwaye awunakuthatha amayeza angenayo i-estrogen; kunye nokuzivocavoca, ikhalsiyam, kunye nevithamin D njengoko kucetyisiwe ngumboneleli wakho wezempilo okanye ingcali ye-endocrinology)
Ezinye ii-estrogens zikwasetyenziswa njengonyango lokuchuma kwimeko yokungachumi. Kule meko, ii-estrogens zisetyenziselwa ukulungiselela ubume besibeleko sokukhulelwa.
I-Estrogen inokusetyenziswa njengenxalenye ye iyatshintsha ukusuka kwindoda kuye kwabasetyhini, ngokudibeneyo namanye amachiza.
Iipilisi zolawulo lokuzalwa ziqulathe i-estrogen kunye neprogesterone, okanye iprogesterone kuphela.
Umboneleli wakho wezempilo unokunika ingcebiso yezonyango kwiindidi ezahlukeneyo ze-estrogen kwaye ukuba ngaba ikho efanelekileyo kuwe.
Ngubani onokuthatha ii-estrogens?
Ngaba amadoda angathatha ii-estrogens?
Kwiimeko ezithile, amadoda angathatha ii-estrogens kwizalathiso ezithile. Eminye imizekelo yexesha apho amadoda angathatha iimveliso ze-estrogen zezi:
Ukususwa kwamasende (ukuthenwa)
Ukuphucula umgangatho wobomi kwiimeko ezithile zomhlaza webele we-metastatic okanye umhlaza we-Prostate oxhomekeke kwi-androgen
Xa uphantsi kotshintsho lwesini ukusuka kwindoda kuye kwabasetyhini (ngokudibanisa namanye amayeza)
Ngaba abantu basetyhini banokuthatha ii-estrogens?
Abasetyhini banokuthatha unyango lwe-estrogen hormone ukunyanga iimpawu ze-menopausal, kunye nezinye izinto ezichaziweyo apha ngasentla. Abasetyhini abakhulelweyo okanye abancancisayo akufuneki bathathe i-estrogen.
Ngaba abantwana banokuthatha ii-estrogens?
Ngokubanzi, abantwana abayithathi i-estrogens. I-Estrogens khange ivavanyelwe ukhuseleko kunye nokusebenza kwabantwana. Nangona kungaboniswanga ukusetyenziswa kwabantwana, maxa wambi i-estrogen cream isetyenziselwa off-ileyibheli izizathu, njengokunyanga ukubambelela kwelebhu. Unyango lwe-Estrogen lukwasetyenziselwa ngaphandle kwelebheli ukunyanzela ukufikisa kwiimeko ezithile zokulibaziseka kokufikisa. Kwiidosi ezinkulu kunye nexesha elingaphezulu, i-estrogen inokubangela ukufutshane kwesiqu.
Ngaba abantu abadala banokuthatha ii-estrogens?
Khange kubekho zifundo zaneleyo kubantu abadala abasetyhini nakwamayeza e-estrogen. Kwizifundo zeWomen's Health Initiative (WHI), bekukho umngcipheko ophezulu wokubethwa sisifo sengqondo esixhalabisayo kwabasetyhini abangaphezulu kweminyaka engama-65 ubudala abathathe i-estrogen yodwa. (Kwabasetyhini abangaphezu kwama-65 abathathe i-estrogen kunye neprogestin, kwabakho umngcipheko ophezulu wokubethwa ngumhlaza kunye nomhlaza wamabele.)
Umboneleli wakho wezempilo angakunika iingcebiso zonyango ukuba kufanelekile na ukuthatha i-estrogen, kunye nemingcipheko kunye nezibonelelo ezichaphazelekayo.
Ngaba ii-estrogens zikhuselekile?
Ungakhangela Idatha ye-FDA apha ukufumana uhlaziyo ngokukhumbula.
I-Estrogens ine isilumkiso sebhokisi , Esisisilumkiso esomeleleyo esifunwa yi-FDA (e-United States yokutya kunye noLawulo lweeDrug). Izilumkiso zisebenza kuzo zonke iindlela zokwenziwa kwe-estrogen.
Ukusebenzisa i-estrogen yodwa (ngaphandle kweprogestin) kumfazi onesibeleko kunokunyusa umngcipheko womhlaza we-endometrium. Ukongeza iprogestin kunokuwunciphisa lo mngcipheko, kodwa kunokunyusa umngcipheko womhlaza wamabele. Abasetyhini abasemva kokuya exesheni abopha gwenxa / ukuya exesheni ngokungaqhelekanga kufuneka bavavanywe ukuze kukhangelwe ukuba abanabungozi.
I-Estrogen akufuneki isetyenziswe yodwa ukuthintela isifo sentliziyo okanye isifo sengqondo esixhalabisayo. Uphononongo lwe-Women's Health Initiative (WHI) luye lwazimisela ukuba kukho umngcipheko owandayo wokubethwa yintlungu kunye ne-DVT (deep vein thrombosis, okanye i-clot yegazi emlenzeni) kwabasetyhini abasemva kwe-postmenopausal abathathe i-estrogen yodwa (ngaphandle kweprogestin).
Olu phononongo lufumene umngcipheko owandayo wokudodobala kwengqondo kubantu basetyhini abasemva kwendoda abaye bathatha i-estrogen bodwa.
I-Estrogen kunye neprogestin:
Sukusebenzisa i-estrogen kunye neprogestin ukukhusela isifo sentliziyo okanye isifo sengqondo esixhalabisayo. Uphononongo lwe-WHI lufumene umngcipheko ophezulu we-DVT, i-PE (pulmonary embolism), ukubetha, kunye ne-MI kwabasetyhini abasemva kwemini abathathe i-estrogen kunye neprogestin. Olu phononongo lufumene umngcipheko ophezulu wokudodobala kwengqondo kubantu basetyhini abasemva kwendoda abaye bathatha i-estrogen ngeprogestin.
Isifundo se-WHI sikwamisele ukuba kukho umngcipheko owandayo wokuhlaselwa ngumhlaza webele kunye ne-estrogen kunye neprogestin.
I-Estrogens, nokuba imiselwe kunye okanye ayinayo iprogestins, kufuneka imiselwe kwelonaqondo lisezantsi kunye nelona xesha lifutshane. Thetha nomboneleli wakho wezempilo malunga nemingcipheko kunye nezibonelelo zeentlobo ezahlukeneyo zonyango lwe-estrogen.
Ugqirha wakho uya kukunika iingcebiso zonyango malunga novavanyo. Bonke abantu basetyhini kufuneka bavavanywe ibele minyaka le yingcali yokhathalelo lwempilo kwaye bazihlole qho ngenyanga. Bonke abantu basetyhini kufuneka babe ne-mammography esekwe kubudala, izinto ezinobungozi kunye nembali.
Ukuphendula ngokuthe ngqo kwi-estrogens kwenzeke kwiimeko ezinqabileyo. Ukuba unemitsipa, ukurhawuzelela, ukuphefumla nzima, ukugabha, okanye ukudumba kobuso, imilebe, ulwimi, izandla, okanye iinyawo, funa unyango kwangoko. Kwabasetyhini abane-angioedema yelifa, amayeza e-estrogen anokuzenza mandundu iimpawu ze-angioedema.
Musa ukuthatha ii-estrogens ukuba:
Unokopha okungaqhelekanga (okungafunyaniswanga) ukopha kwilungu lobufazi
Unomdlavuza webele (okanye imbali yomhlaza wesifuba)
Unomhlaza wesibeleko (okanye imbali yomhlaza wesibeleko)
Unamahlwili egazi emilenzeni okanye kwimiphunga (okanye imbali yamahlwili egazi)
Uye wahlaselwa sisifo sentliziyo okanye ukubetha
Yiba neengxaki zesibindi
Uye waba neziphumo ezibi kwi-estrogens
Ukhulelwe okanye ucinga ukuba ukhulelwe
Umboneleli wakho wokhathalelo lwempilo unokunika ingcebiso yezonyango kwimingcipheko kunye nezibonelelo ze-estrogens kuwe, ngokusekwe kwimbali yakho yonyango.
Ngaba ungathatha i-estrogens ngelixa ukhulelwe okanye uncancisa?
Musa ukuthatha ii-estrogens ukuba ukhulelwe okanye uncancisa.
Ngaba izinto ezilawulwa yi-estrogens?
Hayi, ii-estrogens azizizo izinto ezilawulwayo.
Iziphumo eziqhelekileyo ze-estrogens
Iziphumo ziyahluka ngokwimveliso. Umzekelo, imveliso ye-estrogen yelungu lobufazi inokuba nefuthe lendawo njengokucaphuka, ngelixa ithebhulethi yomlomo inokuba nefuthe lenkqubo efana nokuthamba kwebele.
Iziphumo eziqhelekileyo zeemveliso ze-estrogen zibandakanya:
Ukuthamba kwebele / iintlungu
Ukopha kwilungu lobufazi
Ukuqunjelwa okanye ukutyiwa
Ukugcinwa kolwelo / ukudumba
Usulelo lobufazi igwele
Iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu zeemveliso ze-estrogen zibandakanya:
Umhlaza we-Endometrial (kwabasetyhini abanesibeleko abangasebenzisi iprogestin kunye ne-estrogen)
Isifo sengqondo esiyingozi
I-triglycerides ephezulu (uhlobo lwe-cholesterol)
Olu alukho uluhlu olupheleleyo lweziphumo ebezingalindelekanga. Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga zinokwenzeka. Buza umboneleli wakho wezempilo malunga nokuba zeziphi iziphumo ebezingalindelekile kwiimveliso ze-estrogen.
Ixabisa malini ii-estrogens?
Unyango lwe-Estrogen kuphela luza ngeendlela ezahlukileyo ukuze zilungele ukhetho kunye neemfuno zesigulana, kubandakanya amabala, iipilisi, inaliti, iikhrim zangasese, iipilisi zelungu lobufazi, kunye nemisesane yelungu lobufazi. Amaxabiso ayahluka ngokusekwe kulwakhiwo kunye nophawu okanye imeko generic, kunye neinshurensi yakho. Unokuqhagamshelana nomboneleli wakho weinshurensi ngolwazi olusexesheni malunga nokugubungela. Olunye ukhetho kukusebenzisa isimahla Ikhadi elilodwa lokuKhathalela amayeza amiselweyo yingcali yezempilo.
Ngaba kukhuselekile ukuthenga amayeza am amayeza eMexico?
I-albuterol iphelelwe lixesha ndingayisebenzisa
ithatha ixesha elingakanani ukubanda?
Ndingenza ntoni ukwehlisa uxinzelelo lwegazi oluphezulu
zi-halogalog kunye novolog into efanayo
indlela yokulahla uzwane ngundo ngokwemvelo